"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : Samsung S5 Mini အတု နှစ်းလုံးရဲ့ နှိုင်းရှင်ချက်။
ကျွန်တော် ဒီ Samsung S5 Mini Clone လေးနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတာ ရက်အတော်ကြာနေပါပြီ ဒီဖုန်းအကြောင်းပြုပြီးရေးဖြစ်နေတဲ့ Post တွေလဲ များလာပါပြီ ဒီနေ့ ထပ်တွေ့ တဲ့ သတင်းအချက်လက်လေးတွေကို ပုံနဲ့ တစ်ကွမြင်ရတော့ ထပ်တင်ခြင်တာနဲ့ဒီ Post ကိုထပ်ရေးတာပါ၊ ဒီ ဖုန်းကို ပြန်အသက်သွင်းနိုင်မှာ အရင်းငွေလေး ပြန်ရမှာပါ၊ အတုပေမဲ့လဲ မလေးငွေ ၅၀၀ ကျော်တန်ပါတယ်၊
မစားရက် မသောက်ရက် လေးနဲ့ ဝယ်လိုက်ပြီး ဂန့် သွားတဲ့ဖုန်းကို အသက်သွင်းနေတာ ကနေရလာတဲ့ အတွေ့ အကြုံ လေးတွေပါ။ ခက်နေတာက ဒီ Samsung S5 Mini Clone မှာကို အတုက လက်ရှိ နှစ်မျိုးဖြစ်နေတော့ လိုက်ရင်းနဲ့ လယ် နေတာကိုလည်း ကို့ ဘာသာ သတိထားမိပါတယ်။
အောက်ကပုံ ဟာလည်း Samsung S5 Mini Clone ပါ သို့ သော်လဲ ကျနော်နဲ့မတူပါဘူး၊
အထက်ပါပုံမှာ သူရဲ့ RAM က လက်ရှိ MB ကိုပြထားပေးပါတယ်၊ SIM Card အထားအသိုဟာ ကျွန်တော့ အလုံးနဲ့ မတူပါဘူး။ သူ့ ရဲ့အနောက်ဖက်အခြမ်းအမြင်က အောက်ကပုံလို မျိုးပါ။
1. Model: Samsung Galaxy S5 Mini
2. Quad Core Band: 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA 850/2100MHz
6. Color: Blue/Golden/Black/White
2. CPU: MTK6572(dual core 1.2GHz) / MTK6582 (quad core 1.3GHZ)
4. RAM: 256MB/1GB
5. Support Extend Card: Up to 16GB
2. Type: IPS screen, Corning II Gorilla Glass
3. Resolution: 480 x 800/960x540
4. Screen Color: 16000K
1. Camera: Front 1.2MP, Back 5.0MP/ 2MP+8MP
2. Camera Function: Support Audio Video Filming, Recording Time, Depending on Memory Card Size
3. Camera Picture Resolution: 320 x 640
1. Audio File Format: MP3 / WAV / AMR / AWB
2. Video File Format: 3GP / MPEG4
3. Image File Format: JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF
4. E-book Format: TXT / CHM / DOC / HTML
5. FM Radio: Yes
6. Earphone Port: 3.5mm
1. Data Transfer: USB/Bluetooth
2. Mobile Internet: Security Settings-( Blacklist, Privacy Protection, Power-on Password, Anti-theft Feature)
1. Stand-by Time: 72 Hours
2. Talk Time: 8 Hours
1. Language: English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Deutsch, Espanol, French, Italiano, Kiswahili, Magyar, Polski, Portuguese, Sinugboanon, Tagalog, Ukrainian, Hebrew, Bengali, Arabic, Persian, Hindi, India Urdu, Thai, Korean, Japanese
2. Phonebook: 500
4. Input: Handwrite/Keypad
5. JAVA: Yes
6. WIFI: Yes, 802.11 b/g/n
7. Bluetooth: Bluetooth 2.0
8. Gravity Sensor: Yes
9. Multi-Touch: Yes
10. Dimensions: (4.88 x 2.48 x 0.39)" / (12.4 x 6.3 x 1)cm (L x W x H)
11. Net Weight (Including Battery): 4.48oz / 127g
12. Other Feature: WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, Wallpapers, Calendar, Calculator, Clock, Camera, Play Store, etc
1 x Charger(US/EU/AU/UK style to choose)
အထက်မှာပြပေးထားတာကတော့ OS 4.2.2 ပါ အောက်က
အချက်လက်များကတော့ OS 4.4.4 ပါ။
အောက်ကပုံကတော့ ကျွန်တော့လက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အမျိုးစားပါ။ နှစ်ခုစလုံးဟာ အတုများဖြစ်သော်လည်း အမြင်အရ ကျွန်တော်အလုံးက အစစ်နဲ့ ပိုတူနေသယောက်ရှိပါတယ်။
ဒီ နှစ်ခုဟာ တူသလိုလို နဲ့မတူတော့ ကျနော်လဲ ရေလိုက်တွေလွဲနေပါတော့တယ်။ ကျနော်ဖုန်းရဲ့ နောက်ဖက်ခြမ်း အမြင်ပုံက အောက်ကပုံပါ။ အမြင်အရ လက်ရှိကျွန်တော်လက်ထဲ မှာ ရှိ်နေတဲ့ အလုံးက အစစ်နဲ့ပိုတူနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။
အောက်ပုံကို ကြည့်ရင် ကျွန်တော့အလုံးဟာ အစစ်နဲ့ ပိုတူပါတယ် စစ် နည်းပေါင်းစုံနဲ့ လဲ စစ်ခဲ့တာမို ကောင်းကောင်း ကို အနှပ်ခံလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ အောက်ကပုံထဲက အနက်ရောင်ဟာ Samsung S5 Mini အစစ်ပါ။ ကျွန်တော့ ဖုန်းနဲ့ အတော်ကို တူပါတယ်။
အောက်ကပုံကတော့ ဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့ အပေါက် ခြင်းမတူလို့အစစ်လို့ ပြောထားပါတယ် သို့ သော်လဲ အတုတွေမှာပါ ဘက်ထရီအားသွင်းပေါက်ခြင်းတူနေတာ ရှိပါတယ်၊ ကျွန်တော် လက်ထဲကအလုံးကတော့ သူနဲ့ မတူပါဘူး။
လက်ရှိ ကျွန်တော့လက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဖုန်းရဲ့ ဘက်ထရီအားသွင်းပေါက် က တော့ အောက်ကပုံမျိုး ပါ။
ကျွန်တော့ ဖုန်းရဲ့ သတင်းအချက်လက်များကိုတော့ ရေးပြီးသား Post ဖြစ်တဲ့ Link မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှု ကြပါ။ ဒီ ဖုန်းအကြောင်းကို လေ့လာရင်း လက်ရှိ အခု ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Lap-Top ဟာ Windows XP ဖြစ်နေတာကြောင့် အခက်အခဲများစွာတွေ့ နေရပါတယ်။ Windows XP အစစ်ကို သုံးနေသော်လည်း Microsoft ကအထောင့်အပန့်မပေးတော့သလို Java JDK ကိုလည်း အသုံးပြု လို့ မရတော့ ဖုန်းရဲ့ Recovery Mode ထဲမှာ လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အချက်လက်တွေဟာ အတော်လေး အခက်ခဲဖြစ်နေရပါတယ်၊ ဒီပညာတွေ လေ့လာဖို့လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် အချိန်ကလဲ လိုပါတယ်။ လုပ်ကိုင်နေရင်း ငွေပြတ်သွားလို့Windows 8 တင်ထားတဲ့ Lap-Top ကိုလဲ ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်က ရောင်းလိုက်ရပါတယ် အလုပ်မရှိတော့ ငွေမရှိဘူးလေ။ နောက်ထပ်ရေးမဲ့ Post မှာ ဖုန်းရဲ့ Recovery Mode ထဲမှာ လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အချက်များကို ရေးသားပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Than Minn Naing at 1:03 AM